အော့စလိုမြို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
အော့စလိုမြို့သည် နော်ဝေနိုင်ငံ၏ မြို့တော်နှင့် လူဦးရေအများဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။ ၁၈၃၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် မြူနီစပယ်မြို့အဖြစ် သတ်မှတ် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၀၄၈ ခုနှစ်တွင် နော်ဝေဘုရင်ဟာရဲက တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၆၂၄ ခုနှစ် မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် မြို့အတွင်း အကြီးအကျယ် ပျက်စီးခဲ့ရသည်။
ဆောင်ပုဒ်: Unanimiter et constanter (Latin)
ကိုဩဒိနိတ်: 59°55′0″N 10°44′0″E﻿ / ﻿59.91667°N 10.73333°E﻿ / 59.91667; 10.73333ကိုဩဒိနိတ်: 59°55′0″N 10°44′0″E﻿ / ﻿59.91667°N 10.73333°E﻿ / 59.91667; 10.73333
၄၈၀.၇၆ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁၈၅.၆၂ စတုရန်းမိုင်)
၄၅၄.၀၈ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁၇၅.၃၂ စတုရန်းမိုင်)
၂၆.၆၈ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁၀.၃၀ စတုရန်းမိုင်)
၂၃ မီတာ (၇၅ ပေ)
လူဦးရေ (1 January 2018)
၁၄၀၀/km၂ (၃၆၀၀/sq mi)
ဥရောပအလယ်ပိုင်း စံတော်ချိန် (UTC+1)
ဥရောပအလယ်ပိုင်း နွေစံတော်ချိန် (UTC+2)
အော့စလိုမြို့သည် နော်ဝေးနိုင်ငံ၏ မြို့တော်ဖြစ်သည်။ အကြီးဆုံးဆိပ်ကမ်းမြို့လည်း ဖြစ်သည်။ နော်ဝေးနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းရှိ အော့စလို ဖီအော့ထိပ်တွင်တည်ရှိ၍ ယခင်က ခရစ္စတီယန်းနီးယားမြို့ဟု ခေါ်တွင်သည်။ ၁ဝ၄၈ ခုနှစ်တွင် ဟဲရိုးဆစ်ဂတ်ဆန်ဘုရင်သည် ထိုမြို့နေရာ၌ ရှေးအော့စလိုမြို့ဟောင်းကို တည်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် နော်ဝေးနိုင်ငံကို ဒိန်းမတ်ဘုရင်များ ကြီးစိုးစဉ်က ယင်းမြို့ဟောင်းသည် မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရလေသည်။ ဒိန်းမတ် နှင့် နော်ဝေဘုရင် စတုတ္ထခရစ္စတီယန် လက်ထက် ၁၆၂၄ ခုနှစ် တွင် ထိုနေရာ၌ မြို့သစ်တည်၍ ခရစ္စတီယန်းနီးယားဟု အမည်မှည့်ခေါ်သည်။ တစ်ဖန် ၁၉၂၅ ခု ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက် နေ့တွင် အော့စလိုဟု ပြောင်းခဲ့ကြသည်။
အော့စလိုမြို့သို့ ပင်လယ်ဘက်မှ ဝင်ရောက်လာသောအခါ လက်ျာဘက်ရှိ ကျောက်တောင်အမြင့်စွန်းပေါ်တွင် ၁၃ဝဝ ပြည့်နှစ်ခန့်လောက်က တည်ဆောက်ခဲ့သော အေကာရှုခံတပ် ဟောင်းကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။ မြို့အနောက်မြောက်ဘက် တောင် ကုန်းပေါ်တွင် ဘုရင်၏နန်းတော်တည်ရှိသည်။ မြို့ပတ်ဝန်း ကျင်တွင် တောင်တန်းများဝန်းရံလျက်ရှိရာ မြို့သူမြို့သားတို့ သည် ထိုအရပ်ဒေသသို့ နွေအခါ၌ အပန်းဖြေ ခရီးထွက်ခြင်း၊ ဆောင်းအခါ၌ ရေခဲလျှောစီးခြင်း အစရှိသော ပျော်ရွှင်မှုများကို ပြုလုပ်နိုင်ကြသည်။
မြို့တွင်း၌ စတော်တင် ပါလီမန်အဆောက်အအုံ၊ အမျိုးသားဇာတ်ရုံနှင့် အော့စလိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းတို့ တည်ရှိ သည်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းအနီးတွင် အနုပညာပြတိုက်နှင့် သမိုင်းဆိုင်ရာပြတိုက်တို့လည်းရှိသည်။ မြို့၏အနောက်ဘက်တွင် အလွန်ရှေးကျသော ဗိုက်ကင်းသင်္ဘောသုံးစင်း ထားရှိရာပြတိုက် ရှိသည်။
အော့စလိုမြို့သည် ခေတ်မီမြို့ကြီးတစ်မြို့အဖြစ်သို့ တိုး တက်လျက်ရှိသည်။ သင်္ဘောတည်ဆောက်ခြင်းသည် အဓိက စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်၍ မီးခြစ်စက်၊ သားရေလုပ်စက်၊ စက္ကူစက် တို့သည်လည်း ထင်ရှားသော စက်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။ သစ်သား၊ ငါး၊ နို့ဆီ၊ ထောပတ်နှင့် သားရေစိမ်းတို့ကို နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ၁၉၄ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့တွင် ဂျာမန်တပ်များသည် အော့စလိုမြို့ကို တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် နော်ဝေးဘုရင်နှင့်တကွ အစိုးရ အဖွဲ့သည် အင်္ဂလန်ပြည်မှနေ၍ ဂျာမန်တို့ကို ဆက်လက်ခုခံ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြရာ ၁၉၄၅ ခုနှစ် မေလ ၈ ရက်နေ့တွင် မြို့တော်၌ ဂျာမန်တို့ လက်နက်ချ အညံ့ခံကြရလေသည်။ အော့စလိုမြို့လူဦးရေမှာ ၁၉၇၃ ခုနှစ် ခန့်မှန်းခြေအရ ၃၉၆ဝ,ဝဝဝ ယောက် ဖြစ်သည်။ 
↑ Arealstatistikk for Norge။ Kartverket (16 October 2014)။ 19 April 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Population, 1 January 2016။ Statistics Norway (19 February 2016)။ 28 March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Population and land area in urban settlements, 1 January 2014။ Statistics Norway (9 April 2015)။6September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Population and population changes, Q2 2015။ Statistics Norway (20 August 2015)။ 13 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ regionaldepartementet၊ Kommunal- og (9 May 2003)။ St.meld. nr. 31 (2002-2003) (in no)။
↑ "Folketalet ved nyttår var5258 000" (in nn-NO)၊ ssb.no။
↑ Immigrants and Norwegian-born to immigrant parents, 1 January 2017။ Statistics Norway။2June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Finn postnummer og adresser i Norge og utlandet။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အော့စလိုမြို့&oldid=402400" မှ ရယူရန်
၂၉ မေ ၂၀၁၈၊ ၁၇:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ မေ ၂၀၁၈၊ ၁၇:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။